उल्लूको अर्थ बुद्धिमान पनि ! | Ratopati
शनिबार ८ कात्तिक, २०७७ Saturday, 24 October, 2020
उल्लूको अर्थ बुद्धिमान पनि !
केही रमाइला जानकारीहरु
personरातोपाटी संवाददाता exploreकाठमाडौं access_timeअसोज ७, २०७७ chat_bubble_outline0
सामान्यत: उल्लू राति शिकार गर्ने चरा हो । तर मुर्खको प्रतिकको रुपमा पनि यो शब्द प्रयोग हुने गर्छ ! कोही मानिसले मुर्खतापूर्ण काम गर्यो भने ‘कस्तो उल्लू रहेछ !’ भन्ने गरिन्छ । त्यसैले उल्लू (Owl) को अर्थ मूर्ख, बुद्धू नभएर बुद्धिमान पनि हुन्छ भन्दा तपाईंलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ । तर प्राचीन ग्रीकमा उल्लूलाई बुद्धिको देवताको रुपमा लिने गरिन्थ्यो र ग्रीक भाषामा Owl को अर्थ बुद्धिमान भन्ने हुन्छ ।
वास्तवमा, रात्रिचर यस प्राणीले मूसा, सर्प, बालीनालीमा लाग्ने कीरा फट्यांग्राहरु खाएर कृषकहरुलाई मद्दत गर्ने भएकोले प्राचीन ग्रीकवासीहरुले यसलाई बुद्धिको देवताको रुपमा लिएका हुन सक्छन् ।
T.F.M. को अर्थ
कतिपय नुहाउने साबुनहरुमा T.F.M. लेखिएको पाइन्छ । के तपाईंलाई थाहा छ– यसको अर्थ के हो ? वास्तवमा, T.F.M. को अर्थ हो– Total Fatty Matter । यसले त्यस साबुनमा कति प्रतिशत चिल्लो पदार्थ राखिएको छ भन्ने कुरा जनाउँदछ ।
यसरी बन्छ दूधबाट दही
दूधलाई निश्चित तापक्रममा लामो समयसम्म छाड्ने हो भने, त्यसमा मोइक्रोन्स नामक व्याक्टेरिया क्रियाशील हुन्छ । त्यस ब्याक्टेरियाले दूधलाई फटाइदिन्छ । उक्त व्याक्टेरियाले दूधमा पाइने ल्याक्टोजलाई पनि लेक्टिक एसिडमा परिवर्तन गरिदिन्छ । फलतः दहीको स्वाद अमिलो अमिलो बन्न जान्छ ।
हज्जारौं वर्ष पहिलेदेखि नै घाम तथा पानीबाट बच्न छाता ओढ्ने चलन रहेको पाइन्छ । प्राचीन कालमा कतिपय समाजमा त छाताको आकार र रंगले तिनीहरुको सामाजिक हैसियत समेत दर्शाउने गर्थ्यो । छाताको आविष्कार कहिले र कसले गर्यो भन्ने कुरा अहिलेसम्म किटानी भन्न सकिने स्थिति छैन । तर इतिहासकारहरुको मतमा छाताको आविष्कार चीनमा भएको हो ।
भाषाबारे यो तथ्य
संसारमा सबैभन्दा बढी देशहरुमा बोलिने भाषा अंग्रेजी हो । तर सबैभन्दा बढी बोलिने भाषा चाहिँ चिनियाँ भाषा (Mandarin) हो । संसारमा करीब तीन हजारवटा विभिन्न भाषाहरु बोलिन्छन् । औसत रुपमा एउटा व्यक्तिले एक दिनमा ४ हजार वटा शब्दहरु बोल्ने गर्छन् । संसारमा सबैभन्दा बढी शब्दहरु भएको भाषा अंग्रेजी हो । सबैभन्दा सानो शब्द अंग्रेजी वर्णमालाकोaहो भने सबैभन्दा बढी बोलिने अक्षर पनि अंग्रेजी वर्णमालाकै i हो ।
सबैभन्दा बढी बच्चा हुने राष्ट्रपति
अमेरिकाको इतिहासमा सबैभन्दा बढी बालबच्चा हुने राष्ट्रपतिको रुपमा जोन टायलर (John Tyler) को नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ । अप्रिल ६, १८४१ देखि मार्च ३, १८४५ सम्म अमेरिकाको राष्ट्रपति पद सम्हालेका जोन टायलरका जम्मा १५ जना बालबच्चाहरु थिए ।
शनि ग्रहको चुम्बकीय क्षेत्र
प्रत्येक ग्रहको चुम्बकीय क्षेत्र हुन्छ । कुनै ग्रहको कम हुन्छ त कुनै ग्रहको बढी । अमेरिकाको मानवरहित यान ‘पायोनियर– ११’ ले पत्ता लगाएअनुसार, शनिग्रहको चुम्बकीय क्षेत्र पृथ्वीको भन्दा १,००० गुना बढी शक्तिशाली छ । तर बृहस्पति ग्रहको भन्दा चाहिँ २० गुना कमजोर । हेक्का रहोस्, उक्त अमेरिकी यान सन् १९७९ मा शनिग्रहको २०,८०० किलोमिटर नजिकबाट उड्ेको थियो ।
अति छिटो छरितो वा फूर्तिसँग काम गर्ने मान्छेलाई ‘बिजुलीजस्तो छिटो’ भन्ने चलन हामीकहाँ छ । ‘बिजुलीजस्तो छिटो’ भन्नुको अर्थ नै अति छिटो भन्ने बुझिन्छ । वास्तवमा, बिजुली –प्रकाश) को गति पनि अति छिटो नै हुन्छ । एक सेकेण्डमा प्रकाशले २९९७९२.४५८ किलोमिटरको दूरी पार गर्छ ।
नखाई ६ महिना बाँच्ने जीव
एउटा ह्वेलले एक दिनमा करीब ३ टनसम्म भोजन गर्न सक्छ । तर विचित्रको कुरा के छ भने, यो प्राणीले ६ महिनासम्म केही नखाइकन पनि बस्न सक्छ ।
उभिएरै सुत्ने प्राणी
अधिकांश जीवहरु सुत्नको लागि लड्ने गर्छन् । तर घोडा यस्तो विचित्रको प्राणी हो, जुन उभिएरै पनि निदाउन सक्छ ।
अफ्रिकाको सहारा मरुभूमिमा बालुवाका अग्ला अग्ला पहाडहरु पाइन्छ । ती पहाडहरुमध्ये कुनै कुनैको उचाई त १४०० फूटसम्मका पनि हुन्छन् ।
पृथ्वीकै सबैभन्दा विशाल मरुभूमि मानिएको सहारा मरुभूमिको क्षेत्रफल ९० लाख वर्ग कि.मी. मानिएको छ । यो भनेको पृथ्वीको कूल जमीनको १÷८ भाग हो ।
सूर्यले पनि परिक्रमा गर्छ !
हाम्रो धरती पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्छ । तर स्वयं सूर्यले पनि आकाशगंगालाई परिक्रमा गरिरहेको हुन्छ । वैज्ञानिकहरुका अनुसार, उत्पत्तिकालदेखि अहिलेसम्म सूर्यले आकाशगंगाको २० पटक परिक्रमा गरिसकेको छ ।
हाम्रो शरीरको हड्डी अद्भूत शक्तिशाली हुन्छ । शक्तिमा यो शक्तिशाली धातु ग्रेनाइटजत्तिकै हुन्छ । यो कति शक्तिशाली हुन्छ भने एउटा सलाईको बट्टा जत्रो हड्डीले एक टन तौल थाम्न सक्छ ।
हाम्रो शरीरमा औंला यति महत्वपूर्ण हिस्सा हो, यसलाई नियन्त्रण गर्न हाम्रो मस्तिष्कले अधिकांश समय खर्च गरिहेको हुन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न मस्तिष्कले जति समय खर्च गर्छ, त्यति समय छाती र पेटलाई नियन्त्रण गर्न पनि लाग्दैन ।
चन्द्रमामा पनि सागर
पृथ्वीको चन्द्रमामा एउटा सागर छ, जसको नाम वर्षाको सागर (Sea of Rains) राखिएको छ । रोचक त के छ भने, उक्त सागरमा एक थोपा पनि पानी छैन ।
अन्तरिक्षमा पनि बाँच्न सक्ने अमर जीव ‘पानी भालु’
९ कक्षासम्म पढेका किरपाल बने प्रोफेसर, लेखे ३३ पुस्तक
टाउको जोडिएका जुम्ल्याहा अपरेशनपछि घर फर्किए
पेरिसको सबैभन्दा अग्लो भवन चढ्दै गर्दा पक्राउ, पाँच वर्षअघि नेपालको झण्डा बोकेर चढेका थिए एक व्यक्ति
फेसबुकले प्याजलाई ‘सेक्सी’ ठानेपछि...
दसैँमा धेरै गुन्जने १० गीत (भिडियोसहित)
यस्ता छन् कलाकारका दसैँ योजना
सुरक्षा निकायको दसैँ : बिदामा कटौती, यसपालि धुमधामका ‘बडाभोज’ स्थगित